Right-Click Menu to Open Any Folder on Windows | Hein Htet Kyaw
Hein Htet Kyaw.
Blogger, Writer, Web Developer, Digital Marketer, eCommerce Manager !
Right-Click Menu to Open Any Folder on Windows
In နည်းပညာTags နည်းပညာ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 25, 2018 8 Views
ဒီရက်ပိုင်းမှာ စိတ်ဝင်စားနေတာကတော့ registry အပိုင်းကိုပဲ။ စိတ်ဝင်စားဆိုရင် Atom သွင်းလိုက်တာ icon blank ဖြစ်ပြီးတော့ Application ကို Right Click Menu ကနေပြီးတော့ နှိပ်လို့မရဘူး Error ပဲတက်လာတော့ ပြင်ရမယ်ဆိုပြီးရှာရှင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ပေါ့လေ :3 အဲဒါနဲ့ပဲ ပြင်ပြီးသွားတော့ နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားသွားတာကတော့ Right Click ထဲမှာ Folder ကော ထည့်လို့မရဘူးလားဆိုပြီးတော့ Googling လုပ်တော့တာပေါ့ :3 လုပ်တော့လဲ မကြာဘူး တွေ့သွားတယ်ပေါ့။ တွေ့သွားဆို Note တစ်ခုအနေနဲ့ ပြန်မှတ်လို့ရအောင်လဲ သိမ်းထားပါမယ်လေဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ဘယ်သူမှမဖတ်တောင် တစ်ချိန်ကိုယ်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ရေးလိုက်ပါဒယ် :3
အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ Win + R ( Window Key + R ) လေးကိုနှိပ်ပြီး regedit ဆိုပြီးရိုက်ပေးလိုက်ပါ။ ပွင့်လာတဲ့ Registry Editor ကနေပြီးတော့ အောက်က Patch လေးအတိုင်းသွားလိုက်ပါ
ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ shell ကို Right Click လုပ်ပြီး New မှာ Key ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ Spotify ! လို့ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ Key Value တွေကိုထည့်မယ်ပေါ့လေ … ( Default ) ဆိုတာကတော့ Right Click နှိပ်လိုက်ရင် ပေါ်လာမယ့် Value ပါ Spotify ! လို့ပေးထားတာကတော့ Right Click နှိပ်လိုက်ရင် Spotify ! ဆိုပြီးပေါ်လာအောင်လုပ်တာပေါ့။ Icon ဆိုတာကတော့ ပေါ်လာမယ့် ဟာလေးရဲ့ Icon ပေါ့ Value ကိုသာ ထားမထားဘူးဆိုရင်တော့ Blank အနေနဲ့သာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ Icon ထည့်ဖို့အတွက်ကတော့ Default အောက်လွတ်တဲ့တစ်နေရာမှာ Right Click > New > String Value ကိုပေးလိုက်ရင်တော့ New Value #1 အနေနဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် အဲဒီနေရာမှာ Icon လို့ရိုက်လိုက်ပြီး icon patch ကို ညွှန်းပေးလိုက်မယ်ဆို အဆင်ပြေပါပြီ။ Icon Value ဟာ .exe .ico အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်လို့ .png file ကိုဆိုရင်တော့ ico file အနေနဲ့ ပြောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ shell အောက်က Spotify ! ကို Right Click နှိပ်ပြီး Key ကိုထပ်ထည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။ ဒီတစ်ခါ Key ကိုတော့ command လို့ပေးပါ့မယ်။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ ( Default ) ကိုအလုပ်လုပ်မယ့် String Value ပေါ့လေ။ command ရဲ့ ( Default ) Value မှာတော့ ကိုယ်ထားချင်တဲ့ Folder patch ကိုထည့်ပါ့မယ်။ ( Default ) Right Click လုပ်ပြီး Modify မှာ Value ကိုပြင်နိုင်ပါတယ်။ Value Data : မှာတော့
[code lang=”bash”]explorer.exe C:\_
ဆိုရင် … right click လုပ်တိုင်းမှာ Folder လေးကိုမြင်ရပြီပေါ့ဗျာ။ Explorer ကနေသွားအုံး လုပ်အုံးဆိုရင် အချိန်ပိုကြာနိုင်တာဖြစ်လို့ အခုလေးလုပ်ထားလိုက်တော့လဲ အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ဗျာ :3 ဒီနည်းအတိုင်းဆိုရင် အခြား Application တွေကိုလဲ ထားထားလို့ရပါတယ် Folder မှမဟုတ်ပဲ Mozilla, Chrome, music Player, etc … ဆိုတော့ကာ … ဘာမှ အခက်အခဲမရှိတောဘူးပေါ့။ ရေးထားတာ ဟိုဟာဒီဟာတွေ များပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ဖတ်တော့လဲ နားလည်တာမလို့ ဒီလောက်ပဲ ရေးတတ်တာမို့။ ဒီလောက်ပဲတော်ပြီ !
နည်းပညာလေ့လာ၏ ရေးချင်တာ ရေးတယ် ဖတ်ချင်တာကိုဖတ်ပါလေ
Free SSL with Lets Encrypt
Fixing Erorrs bootstrap Local documentation
မေ 10, 2017
ဧပြီ 26, 2017
Linux Command chmod Explanation
မေ 8, 2017
Memory Stick ဖြင့် Window Bootable Stick လုပ်နည်း
Timeline ထဲမှာ ကိုယ့် Page ကို Work အဖြစ်ထည့်လို့ မရဘူးဆိုရင် . . .
~[ Activate Windows 10 Pro Permanently ]~
Fat 32 to NTFS !
Private Project can’t Online !
Networking (1) Website Showcase (1) Wireless (1) Xiaomi (3) ထွေရာလေးပါး (4) နည်းပညာ (14)
© 2009 - 2019 Hein Htet Kyaw, INC. All Rights Reserved.